Rune ifomula. Ready runiform ifomula
Runes aziwa abantu kusukela ezikhathini zasendulo. Okhokho bethu wasebenzisa lezi izimpawu elula ngokubiza Ephakeme Amandla, zokuxhumana nabo, ngokombono wabo, ukuletha inhlanhla, umcebo, uthando ngabantu bobulili obuhlukile, enjabulweni yomshado, nokunye. D. Namuhla zalapho Runic amafomula angasetshenziswa ngempumelelo ukuba bathuthukise ukuphila kwabo siqu.
Ukuze noma yimuphi umphumela wayefisa Runes kuyinto ifomula ekhethekile. Sebenza kulesi siqondiso ethile futhi kungaba uhlamvu olulodwa. Nokho, iningi lezi zibonakaliso esetshenziswa. Kulokhu, bona umphelelisi futhi baqinise nomunye. Kukhona kubhejwa, ehlanganisa kokubili Runes ezimbili noma ezintathu, futhi kusukela inani elikhulu lazo.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi amafomula Runic ukusebenza ngemijikelezo. Okusho ukuthi, emva isifiso sakho kuzonikezwa, ukusebenzisa salokhu ifomula zizosebenza kolunye uhlangothi. Ngakho-ke, kubalulekile kulesigaba ukulichitha. Uma kungenjalo, ngeke yonke impumelelo yakho neutralized baphela.
Bargained ngoba runiform amafomula
Ukuze usethe isiqondiso isenzo Runes, ngemva umdwebo ifomula ngenhla ke funda ngqo kushiwo. Ngokuvamile liphinyiselwe kancane - kancane. essence yayo itholakala ukudluliselwa Runes ngumnikazi izifiso kanye saturation amandla abo siqu.
Lapho kwakhiwe luhlaka umbhalo, kukhulunywa yokuba, kumele zithobele le mithetho:
Eyokuqala ukuphimisela igama Runes. Ngakho uma uthanda ukuzifaka uxhumano siqu futhi ukudalula kwabo.
Okulandelayo wachaza ngokuningiliziwe injongo okuyiwona empeleni, ngacula uhlaka isiko. Sachaza kumele kube kakhulu ngokunembile futhi ngokuqondile.
Ngemva kwalokho ibonisa Yiqiniso esikiselwayo ukukhuthazwa ngoba.
Khona-ke kudingeka wenze ezinye kucaciswa. Ngokwesibonelo, ukuqonda Runes, indlela okufanele wenze ukuze hhayi ukulimaza abanye abantu.
Ngesikhathi esigabeni sokugcina futhi ukulibiza igama amalungu lokuba Runes.
Ngezansi sethula wena ifomula Rune, okuyinto libuyekeza kulabo abaye bazisebenzisa lezi zindlela akhayo.
Le formula for edonsa sikufisela inhlanhla
Ukuze ukuheha empilweni yakho sikufisela inhlanhla, kungcono ukusebenzisa ifomula "Geylstseyhen". Siqukethe izinhlamvu ezimbili - i-Rune double Sovulo futhi Teyvaz (Rune ka Thor). Kungenzeka futhi ukuhlela oda le Runes Ansuz, Laguz-Uruz-Gebo-Óðal-Dagaz. Kunikezwe ALUGOD uhlamvu, okusho "inhlanhla ngemilingo." Nokho, ifomula edume kunazo impumelelo yisona inhlanganisela Aansuz, Uruz, Hyeres futhi aphinde Ansuz. Khombisa indlela yokuphuma nesimo esinzima kungaba Rune uSolly - uphawu wokunqoba. Mayelana amandla efanayo itholakala uphawu Dagaz. ukwesekwa Amandla has Fleece Vune. "Usizo onkulunkulu" libizwa njengentelezi izimpawu Ansuz-Mannaz, Uruz. Lokhu uyakwazi ekubeni ngokushesha kakhulu futhi isikhathi eside kumelwe ukulethe inhlanhla indoda.
Formula ukuheha Uthando
Okulandelayo cabanga yiziphi Rune ifomula (kungase kutholakale) uthando. Labo besifazane abafuna ukuthola uzakwethu futhi uqale umkhaya, ungenza talisman we Rune ezintathu: Gebo, Berkana futhi Ofala. Gebo, Tuisaz Isaya futhi ukuvikela black ehlaselwe uthando. Inhlanganisela Ansuz, Laguz-Gebo okungadonsela uthando lweqiniso, ngokwezwi nezwi, "pha ezulwini." Uma udinga ukupela ocansini, sebenzisa ifomula kaKenazi-Pertro-Naytiz. Cabanga ukunyundela lezi Runes futhi ubuhlobo yimpumelelo noma ukuphila komkhaya kujabulise aqinisekisiwe. Berkana (a) -Ingvaz - ekubeni, elakhelwe abesifazane. Ibizwa nangokuthi uphawu Freya, unkulunkulukazi amaNorseman wothando nobuhle. Formula Ansuz-Gebo-Ofala kuyinto analogue of the yomshado wobuKristu. It kuyodingeka sihlele kabili. Ikhophi eyodwa kumele igcinwe nguzakwethu, kwesibili - e umlingani.
Yiziphi formula for edonsa imali
Ukusebenzisa amafomula Runic, ungakwazi ukuheha empilweni yakho hhayi kuphela inhlanhla nothando, kodwa futhi imali. Ngokwesibonelo, inhlanganisela Tiwaz Rune-sowilō-Ofala osomabhizinisi ewusizo kakhulu. Kuyasiza ukuba basinde kule ekuncintisaneni okushubile. Formula Algiz ibhizinisi Algiz-Fehu-Ukuvikelwa, futhi inhlanganisela yalokhu Raido-Fehu-Othila edonsela kwemali. Ukubhala ku ucezu inhlanganisela-Fehu Berkana-Otala-sowilō wakufaka isikhwama, uyobe ukuqinisekisa ngokwakho ngendlela engaguquguquki ukukhula yemali. Ifomula Fehu Cano-Gebo-Sovul ukuheha ukuze inkampani yakho eningi amakhasimende.
Okungenhla amafomula Runic ngemali ngempela kungakwenza wena ocebile. Zama kubo futhi uzobona wena.
Okulandelayo, sibheke ezinye Runic Ukuvikelwa ifomula. inhlanganisela Very interesting kuyinto sowilō-Algiz-sowilō, noma "solar shield". Lokhu ifomula zivikela iyiphi zonke izinhlupheko. Tiwaz Rune, Tiwaz Rune-Thurisaz - alahlwayo talisman siqu. Ngo-kuhlaselwa the host njengokungathi "Kuqhuma", enika kusiqalekiso umqali, futhi ngesikhathi esifanayo self-destructs. Inhlanganisela Gebo-Algiz-Otala ube ephephile-ukuziphatha omkhaya ngokuvamile futhi ikakhulu izingane. Lokhu ifomula liphinde livikele izikhulumi. Ngaphezu kwalokho, ingasetshenziswa iwukudambisa zonke izinhlobo amahlazo nezimpikiswano. Labo ababa nakho abesifazane abaya besaba uthando ukupela, kufanele usebenzise Rune Berkana-Perth Nauthiz.
Yini Runes kufanele sisetshenziselwe ukulungiswa zempilo
ifomula Runic, kungase kutholakale by Izanusi abanolwazi okuhloswe ukuqeda isifo, angase futhi abe wusizo kumuntu. Ukuze icubungulisise ukubhekana zonke izinhlobo zempilo, kufanele usebenzise ukuhlanganiswa kaKenazi Uruz-Ingvaz. Abantu, okuyinto eza ngemva kokuhlinzwa, kungenzeka ukudweba phezu ngokwalo ifomula Pertro-Ingvaz-Berkalo. ewusizo kakhulu kangakanani kubantu besifazane abakhulelwe. Yiqiniso, kunomthelela yokutakula ikakhulukazi siqu sengqondo esiqondile. Sebenzisa ekubeni Vundzho-sowilō kaGera futhi uyobe ngokushesha uzizwe injabulo ekuphileni. Phakathi kwezinye izinto, lokhu Rune ekhombisa zokucindezeleka futhi aqede ukuzibulala. Isikhathi esining impela, lokhu ifomula isetshenziselwa ukuqeda okucasula lezihlobo efile. Enye ifomula eqinile - Nauthiz-Berkane-Nauthiz. Le nhlanganisela angashintsha yisiphi isifo ngasiphi komqondo nezinga lokukhula kwengane yayo. Vala inkinga sezempilo singakunika nokusebenzisa stava Dagaz-Berkana. Labo abafuna uvuseleleke, kufanele afake talisman nge Runes kaGera Pertro.
Formula ukuqeda izitha
Kube amafomula Runic senzelwe isiqondiso spoilage futhi ziqalekiso phezu kwezitha. Yiqiniso, udinga ukusebenzisa abasebenzi njengezinkabi zabo ngokucophelela ngangokunokwenzeka. Ngaphambi kokwenza nakulokho afeze isiko, kufanele ucabange kabili. ezinzima kakhulu isiqalekiso Ifomula, isibonelo, Mannaz-Hagalaz-Ise. Vundzho-Gebo-Vundzho imbangela kubantu abathanda ngokweqile, ukuphuza, ukubhema nokusebenzisa kabi izidakamizwa.
Inhlanganisela ukuxhumana onkulunkulu kanye nentuthuko yomuntu siqu
Ngenhla amafomula Runic ihlolwe, eqinile futhi eqotho. Nokho, akuyona yonke into ngaphakathi lo pilo kuyehla kube into. Okhokho bethu eziye zasungulwa Rune pose, ngokusiza ukuxhumana amabutho ephakeme bemvelo. Union nabo ngeke neqhaza ekuthuthukiseni siqu nezingokomoya. Omunye inhlanganisela enjalo kuyinto Mannaz-Raid-Ansuz. Lokhu ifomula ngeke qondisa you kuze the indlela ekufanele ukukhetha nokukhanya amabutho Zemvelo. Ukuba Ansuz kaKenazi-egqoke ikhuthaza ukuqonda amagugu ephakeme futhi ngesikhathi esifanayo ngokoqobo ekhona. Izimpawu Evaz-Mannaz yakhelwe abantu yokudala abafuna ukuthola izwe. Cishe umphumela esifanayo lo Rune Algiz-Dagaz-Mannaz. Nokho, bajwayele ukuxazulula le nkinga ngokukhethekile.
Okunye ukuhlanganiswa ewusizo
Kunezinye ifomula Runic ezingaba diversify ukuphila futhi ukumenza bajabule kakhudlwana. Ngokwesibonelo, ifomula-Isaya Hagalaz Isaya uwuvikela iphutha futhi kusiza ukulungiswa yabo. Rune sowilō ekujabulisayo indoda isifiso sokuvelela nokuzimisela. Formula sowilō Dag-Fehu kusiza balahle ubudala futhi akusebenzi, kanye ukufinyelela ezingeni entsha. Abavakashi kufanele aqiniseke ukusebenzisa mascot nge Runes Raid-Eyvaz-Laguz. Abantu eligqoke, yibhange ukubuyela ekhaya uphephile. Ungasebenzisa le nakulokho ukuze kuvikeleke ezokuthutha siqu. Kuvikela komgwaqo futhi inhlanganisela kaGera kaGera Raid. Nokho, egqoke lezi izimpawu akufanele kube kaningi kakhulu. Kungenjalo, ungakwazi ukuzithanda vagrancy.
Ukuqeda ukusebenzisa uphuzo ngokweqile, ukubhema, izidakamizwa noma yimuphi omunye umkhuba othile omubi noma ekuthembeleni ngangokunokwenzeka, kusetshenziswa indlela Tiwaz Rune, Mannaz-Nauthiz. Ukuba kaKenazi-Mannaz nge isiqinisekiso ngokuphelele ukuvula uthela iyiphi ithalente. Ngokuba ukuthuthukiswa amakhono engqondo kudingekile ukusebenzisa Rune Mannaz-Ansuz. Uma ubeka ephepheni ukubhala kuwo, Isaya-Algiz-Evaz ngaphansi komqamelo, kuyoba isiqinisekiso ubuthongo omuhle.
Lapho kunesidingo khona ukubeka ifomula
I inhlanganisela ngenhla kungenziwa shi hhayi kuphela ephepheni. Ngokwesibonelo, ekwelapheni ifomula zivame isetshenziswa ukudla noma ukudweba amanzi induku kulandelwa isiphuzo. Ezokuphepha amafasitela kungenziwa shi, isibonelo, izivunulo. Ngezinye izikhathi ngisho ukudweba umzimba uqondile. Kulokhu, ngokuvamile sisetshenziswa kuze kufike ohlangothini lwesobunxele. ifomula Runic lothando, isiqalekiso, futhi iyiphi enye ehlosiwe zokuchayekela abangabazi, uthathelwe uqobo ilungelo. Ezokuphepha zalapho isicelo ngqo kulabo izinto okudingeka ivikelwe kuyo (ekulimaleni noma ukweba). Ngesinye isikhathi, njengamanje Kulokhu, Runes edwetshwe ephepheni wakufaka ngaphakathi.
izifo Cure uyinike kakhulu njalo isicelo isithombe. Ekuvuseleleni i Runes kungenziwa ehoshiweyo izimbiza izimonyo. Izimpawu, ukuvikela ekhaya, ngokuvamile idwetshwa neminyango, amafasitela, ozimele kanye jambs.
Abesifazane ziyazithanda magic Rune ukuthi livame ukusetshenziswa ukudweba lezi zinhlamvu efekethisiwe. Le ndlela kungenziwa kubhekwe ngezinga elithile bendabuko. prapraprababushki wethu ncamashi ehlotshisiwe izingubo zonke izinhlobo izimpawu engcwele.
Yini izinto ngeke yadingeka umkhuba
Ukuze amafomula Runic for imali, oluletha inhlanhla, ezempilo, futhi ngakho isichibiyelo. D. Usebenze, benza izinkonzo olukhethekile uphawu. Ngaphambili, yebo, kufanele kube ukulungiselela zonke izinto ezidingekayo ukudala ifomula. Kulokhu, phakathi isiko, wena ngeke siphazanyiswe, begijima futhi uphazamiseka. Ngakho, uzodinga:
Ishidi ajwayelekile ephepheni.
ngepeni obungangenhloko kakhanjana. Oku-emi isheke ukuseviswa.
Usihlalo edeskini. Ngekusetjentiswa yabo yomsebenzi kuyoba zibelula.
umbusi Ngokhuni. Runes Iningi akhiwa imigqa eqondile. Ngakho-ke, leli thuluzi kungaba wusizo kakhulu. Line ungayithola enye by an piece abavamile kwezinkuni.
Lishe laba ngumlotha umbhalo nokunyundela.
Ngaphambi kokuthi uqale ukudala amafomula kufanele ahlale isikhashana, ukuze uphumule futhi uthole kude zonke ezinye imicabango.
Ukukhanyisa ikhandlela. Lean phezu liphepha ngokucacile ucacise yaso ngokwaso nangenxa yabo yena umgomo ufuna ukuphumelela.
Thatha ipeni ukuqalisa ukudweba uphawu. Kungakhathaliseki ukuthi siyini - ifomula Runic ngoba uthando, impilo, impumelelo, ingcebo. Ngokwenza kanjalo, ukucabanga, njengophawu endiza yonke sikuphendule kube ngokwentando yakho. Dweba uphawu okumelwe ingaphazamiseki futhi ibe ngesikhathi esifanayo fast kakhulu. Ungakwazi pre-Amazing ngisho uphawu lwakhe. Ngo inqubo yokudala ifomula njengoba okuhlanganisiwe uphawu. Uma idwetshwa, sizogxila isikhungo salo. Thumela icala amandla blue okwamanje ubone ukuthi ibhebhetheka kanjani kuwo wonke imigqa ifomula.
Capture uphawu engqondweni yakho bese uthi ngokuzwakalayo amazwi okulungiselele. Ucime amakhandlela.
Ngemva kufunwe ongenalwazi ke ibekwe endaweni lapho kuzosebenza kangcono. Rune Ukuvikelwa ifomula ngokuvamile hung entanyeni esikhwameni. Uma-ke ingumfanekiso okuvikela amasela, wasibeka emotweni nobe ashiye izwe.
Legend of the Runes
Ukulungele Rune ifomula - ke muhle ngempela. Nokho, uma ufuna ungenza zalapho isebenziseke kuwe owakho. Yiqiniso, lokhu kudinga, okokuqala kunakho konke, ukwazi abakuzuzile Runes ngabanye. Lo magazini ngeke okuxoxwe ngazo kulesi sihloko, ngoba ngempela ebanzi. Uma ufisa ukuthola ulwazi oludingekayo uzokwazi ngokwabo. Ngaphezu kwalokho, okufanayo ukukhuluma kancane mayelana lokho Runes futhi ukuthi zazivelaphi.
Scandinavians ube kulesi sici, kukhona omunye kakhulu legend ezithakazelisayo. Esiphakeme uNkulunkulu munye, kokunquma ukufunda yize ukuhlakanipha kwaleli zwe, ngelinye ilanga abethelwe yena ngomkhonto Isihlahla sokuphila. Ngemva wayilengisa ungene izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, wavula futhi Runes. Ngokusho yetinsita base eqoshwe unkulunkulu emhlabeni aphulwa amagatsha futhi namabala ngegazi lakhe.
Odin yena, ngokuvumelana izinganekwane, - ubunikazi akuyona ngalokuvakalako. Okuhle noma okubi - lolu ukuvumelana akuyona Scandinavians. Ibheka ukuthi nabantu abalungile kanye abanye onkulunkulu, lowo kufanele. Kodwa Western lwamaSlav kukhona enye inkolelo-ze ephathelene ne-Odin. Ngokusho yetinsita izikhathi ezimbalwa ngonyaka lo nkulunkulu nge retinue yakhe amahlamvu efile ekuzingeleni. Futhi woe kuze ubani uzohlangana ku uMgibeli ngendlela Ghost. Endaweni lapho bebona ekuzingeleni zasendle kuphela, khona-ke nakanjani yenzeke ezinye inhlekelele yendalo yonke eseduze noma usizi. Kunezinganekwane namaJalimane.
Kukhona futhi inguqulo pragmatic ngaphezulu bavelaphi emhlabathini, lezi zinhlamvu eziyinqaba. Abanye abacwaningi bakholelwa, isibonelo, ukuthi okhokho bethu lwamaSlav phambi uvele Cyrillic, kwadingeka ncamashi Runes. Kodwa kakhulu akwaziwa. Cishe, lezi zinhlamvu ngesikhathi esifanayo futhi bahamba umuzwa bemilingo, asetshenziswa ngenjongo luyingxenye esisebenzayo yokubhala izincwadi, imiqulu kanye namanothi.
Indlela yokwenza Runes yokubhula
Ngenhla lalibhekwa amafomula enamandla kakhulu Runic. Nokho, kungaba lezi izimpawu basendulo babesebenzisa hhayi kuphela ukushintsha ngokoqobo umgomo. Sizisebenzise, kuhlanganise futhi ukuze ukubikezela ikusasa. Ukukhiqiza cottage uboya unqunywe igatsha (ubukhulu cishe 2.5-3 cm) kuyo yonke imithi izithelo. Kwase uthathe yizicucu ubude alinganayo 3 cm. Wona, ugaye ukuze bathole ukushuba ipuleti 1.5 cm. Amabhodi Finished ziphathwe lokukhuhla. Okulandelayo, badinga ukudweba noma dweba Runes ngokwabo kahle.
Izakhiwo, okuvumela ukuba wazi ngekusasa, baningi. I elula kunazo - nedayimani. Runes babebeke phezu izimpawu itafula futhi enyakaza. Ngemva kwalokho, bonke futhi 4 ukuthatha kwabo wabeka rhombus kwesokudla kuya kwesokunxele futhi phansi phezulu. Rune Okokuqala limelela isimo samanje ezindabeni, kwesibili - izithiyo, eyesithathu - zezici ekusizeni ukufeza umgomo, elingaphezulu Sibonisa nalokho, eqinisweni, lolu daba ukuqeda.
Ukusebenzisa amafomula Runic kungenza ukuphila kwakho kujabulise ngokwengeziwe kakhulu. Nakani lezi izimpawu lasendulo, futhi ungakwazi ukuqeda izifo, ukwehluleka, dala nomkhaya ojabulayo ucebe.
Igama Anatoly. Inani kanye negama imfihlakalo
Sifunda ukuthi igama Sofia
Vladislav. Igama. Meaning of the gama isiphetho umnikazi walo
Analgin. Amakhandlela izingane
National Park "uBryce Canyon" (isithombe)
Santa Marina Ihhotela 4 * (Bulgaria / Sozopol) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Isiko Elite vs mass
Izifo Imilunge (izimfanelo nezindlela zokwelashwa)
Isibonelo iphrojekthi nomphakathi. amaphrojekthi Social kubantu abasha: izibonelo